Akụkọ - Huaian District Science and Technology Bureau bịara ụlọ ọrụ anyị iji duzie ọrụ ahụ
Huaian District Science and Technology Bureau bịara anyị ụlọ ọrụ na-eduzi ọrụ
Jeremy Guan, onye isi njikwa Huaian ASN na nkà na ụzụ CO., LTD nyere ndị isi nke Huai'an District Technology Bureau nke bịara ụlọ ọrụ anyị maka nyocha na nyocha nke ọma na August 26th. Ndị isi ụlọ ọrụ nke Technologylọ Ọrụ Nkà na relevantzụ nwere ntị na iwebata mmepụta na mmepe nke ụlọ ọrụ anyị, gara ileta ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị ma mụtakwuo banyere ihe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị, nchọpụta sayensị na mmepe, nkà mmụta sayensị na ihe ndị ọzọ.
Mgbe ha nụsịrị ọnọdụ nke ụlọ ọrụ anyị, ha nwere nzukọ na onye isi ụlọ ọrụ anyị bụ Jeremy Guan na ndị nwere ọrụ nke ngalaba dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ ịghọta ihe isi ike ndị ụlọ ọrụ anyị nwetara na mmepe na mmepe yana Ihe ọrụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ chọrọ n'aka gọọmentị, ka ụlọ ọrụ nwee ike ịkwalite ikike nke teknụzụ ha nke ọma ma kwalite mmepe nke teknụzụ ha.
N’aha ụlọ ọrụ ahụ, General Manager Jeremy nabatara ndị isi nke District Technology Bureau ma kelee maka nkwado siri ike ya. Jeremy kwuru na rụzuru nke ASN Medical taa enweghị nkewapụrụ na atumatu kachasị mma nke mba maka ịchụ nta ego na nkwado sayensị na teknụzụ, yana nlekọta ogologo oge na enyemaka nke ngalaba gọọmentị, ọ nwere olile anya na ngalaba gọọmentị na ọkwa niile nwere ike ịga n'ihu na-akwado ASN Ahụike na-abawanye ma sie ike, anyị ga-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike inye onyinye dị ukwuu na ụba nke akụ na ụba mpaghara.
Ndị isi nke Sciencelọ Ọrụ Science na Technology na District kwenyere na mmepe nke ọrụ sayensị na teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị ma nwee olile anya na ASN Medical nwere ike ịgbalịsi ike ịme ọtụtụ ọrụ ma nweta nsonaazụ ndị ọzọ.
Ndị ọrụ dịịrị ngalaba nke ụlọ ọrụ anyị sonyeere nleta ahụ maka nyocha.
Post oge: Sep-22-2020